Walter Heyer's Transgender Regret Akụkọ. | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Na mbido, enwere m ezigbo obi ụtọ maka mbido ọhụụ. Mana homonụ na ịwa ahụ nwoke na nwanyị gbanwere ịwa ahụ enweghi ike idozi ihe kpatara nsogbu na-eme ka nwoke na nwanyị dysphoria.
Amalitere m njem m nke transgender dị ka nwatakịrị nwoke dị afọ 4 mgbe nne nne m ugboro ugboro, ọtụtụ afọ, yikwasị m uwe elu na-acha odo odo ọ masịrị m nke ukwuu ma gwa m na m mara mma dịka nwanyị. Nke a kụrụ mkpụrụ nke ọgba aghara nwoke wee duga m ịgbanwe na afọ 42 na nwanyị transgender.
Adịrị m ndụ dị ka “Laura” ruo afọ asatọ, mana, dị ka m maara ugbu a, ịkwaga agbanwe adịghị edozi ọrịa ndị kpatara.
Nnyocha na-egosi na otutu ndi mmadu choro ibi ndu dika ndi ozo ihe gbasara uche, dị ka ịda mba ma ọ bụ nchegbu. N'okwu m, achọpụtara m na m dị afọ 40 na dysphoria nke nwoke na afọ 50 na nsogbu nke mmụọ n'ihi mmerụ ahụ ụmụaka.
N'ikpeazụ, ndị mụrụ m chọpụtara, na nleta ndị m na-eleghị anya n'ụlọ nne mama m kwụsịrị. Echere m na nzuzo m adịghị mma, mana nwanne nna m nke ntorobịa nụrụ ya ma chee na m bụ egwuregwu ziri ezi maka ịkwa emo na mmegbu n’ụzọ mmekọahụ. Adịghị m afọ 10. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka uwe na-acha odo odo, ekwere m na nwanne m nwoke agaghị edina m.
Gụkwuo nkọwa nkọwa:
Policieskpụrụ ụlọ ịsa ahụ transgender ụlọ akwụkwọ sekọndrị m na-emebi nzuzo nke ndị ọzọ
Lọ akwụkwọ sekọndrị gaara abụrịrị nwa m nwoke transgender. Emela ya hell maka nwa na-esote.
Mkparị ahụ m mere mere ka m ghara ịchọ ịbụ nwoke ọzọ. Uwe akwa obemeere m ụzọ mgbapụ. Etetara m n’abalị, na-arịọ Chineke ka ọ gbanwee m ka m bụrụ nwa agbọghọ. N'echiche yiri nke nwa m, ọ bụrụ na m ga-abụzi nwanyị, mgbe ahụ, ndị toro eto na ndụ m ga-anabata m. Ọ ga-adị mma.
Ime mkpebi ngbanwe
Dysphoria nke nwoke na nwanyị gbasara njirimara, ọ bụghị agụụ mmekọahụ. Ọ dịghị mgbe m idina ụdị onwe; Enwere m mmasị ịlụ ụmụ agbọghọ. Mgbe m gbara afọ iri abụọ (20s) wee lụọ nwanyị, ekpughere m nwanyị m chọrọ ịlụ gbasara uwe m na-eyi. Ọ chọpụtara na anyị nwere ike ịrụpụta ya. Anyị lụrụ ma nwee ụmụ abụọ.
Na m ndụ ọrụ Enwere m ihe ịga nke ọma, mana nwa agbọghọ ahụ nọ na-eche echiche m. Mgbe m na-eme njem kwa izu, ana m etinye aka n'ejiji, na-eme ka agụụ ịbụ nwanyị.
Mgbe m gbara afọ iri anọ, enweghị m ike ịnagide nrụgide nke ibi ndụ abụọ dị iche. Enwere m ntiwapụ, na-achọ ịbụ ezigbo di na ezigbo nna, mana na oke mmekpa ahụ maka mkpa ịbụ nwanyị.
Achọrọ m ọkachamara ọkachamara n'ihe banyere nwoke na nwanyị n'oge ahụ, Dr. Paul Walker, onye nwere ngalaba na NUMkpụrụ 1979 nke nlekọta maka ahụike transgender. Ọ chọpụtara na m nwere nsogbu njirimara nwoke na nwanyị (ugbu a nwoke dysphoria) ma gwaa homonụ nwoke na nwanyị ka ọ bụrụ nwoke ma ọ bụ nwanyị na-enwe mmekọahụ na ịwa ahụ na-agbanwe mmegharị ahụ nwoke na nwanyị. Ọ gwara m na ihe omume nwata abụghị ihe metụtara nsogbu nwoke na nwanyị ugbu a, na mgbanwe mmekọahụ bụ naanị ihe ngwọta. Amalitere m ịchọrọ homonụ nke nwanyị ma mee atụmatụ maka ịwa ahụ maka Eprel 1983 na Trinidad, Colorado. A bụ m 42.
Alụmdi na nwunye m kwụsịrị obere oge tupu ịwa ahụ. Na mgbakwunye na nhazi anụ ahụ, enwere m ara ara na usoro ndị ọzọ dị iche iche ma gbanwee akwụkwọ ọmụmụ m gaa Laura Jensen, nwanyị. Emezuru m nrọ nwata, na ndụ m dịka nwanyị bidoro.
Mbido ọhụrụ, mgbe ahụ daa ọdịda siri ike
Na mbu, enwere m obi uto. Ọ dị ka mmalite ọhụrụ. Enwere m ike ịkwụsị njikọ nke ndụ mbụ m dị ka Walt na ihe mgbu m n'oge gara aga. Ma eziokwu adịghị anya. Atedmụ m na nwunye mbụ m nwere ndakpọ olileanya. Mgbe m gwara onye were m n'ọrụ, ọrụ m agwụla.
Dị ka Laura, ekpebiri m ịchụso ịbụ onye ndụmọdụ wee bido ọmụmụ ihe na Mahadum California-Santa Cruz na ngwụsị 1980. N'ebe ahụ, mgbape nke nwanyị m ji nlezianya kee meghere, amalitere m ịjụ mgbanwe m.
Ahụhụ m nwetara site n'ịwa ahụ were naanị nwa oge. Zoro ezo n'okpuru etemeete na uwe nwanyị bụ obere nwatakịrị ahụ merụrụ ahụ site na trauma nwata. Anọghachi m na-enwe dysphoria nke nwoke, ma n'oge a, ọ dị m ka nwoke n'ime ahụ m gbanwere ka ọ dị ka nwanyị. Anọ m na-ebi ndụ m na-atụ anya, mana m ka na-egbu onwe m.
Walt Heyer na Palm Desert, California, na 2009. (Foto: Akwụkwọ aka ezinụlọ)
Otu ọkachamara n’ihe gbasara nwoke na nwanyị gwara m ka m nyekwuo ya oge. Afọ asatọ dịka ogologo oge dị egwu nye m. Onweghi ihe obula. Gini mere homonụ na ịwa ahụ akwadoro arụghị ọrụ? Kedu ihe kpatara m ji enwe nchekasị banyere njirimara nwoke m? Gini mere na enweghi m obi uto dika Laura? Gịnị kpatara m ji nwee ọchịchọ siri ike ịbụ Walt ọzọ?
N’echiche, enwere m ọgba aghara. Mana site na iwe na mkpebi siri ike, na ihunanya na nkwado nke ezi-na-ụlọ na ndị ndụmọdụ, a gbasoro m ọgwụgwọ na ọkwa nke uche. Site na nduzi ndị ọkachamara, amaara m ịlọghachite mkpasasị uche nke ntorobịa m. Ọ dịrịghị m mfe, mana ọ bụ naanị ụzọ m ga-esi lebara ọnọdụ ndị kpatara m anya nke na-eme ka nwoke na nwanyị dysphoria.
A bụ m 50 mgbe emepụrụ m ihe mgbochi ara, mana afọ ole na ole sochirinụ nọrọ na mgbagwoju anya na ndụmọdụ. Na 1996, mgbe m dị 55, emesiri m nwere onwe m pụọ n'ọchịchọ ibi ndụ dịka nwanyị wee gbanwee akwụkwọ iwu m laghachi Walt, nwoke mmekọahụ n'ụzọ ziri ezi na nwoke. Aka m ka na-enwe ntụpọ n’obi m, ncheta banyere ịdị ọcha nke nwoke na-eri m afọ 13 nke ndụ m. Anọ m na usoro homonụ na-anwa ịhazi usoro nke gbanwere kpamkpam.
Ihe ụta dị adị
Emechara m zute ọmarịcha nwanyị nke achọghị ịma banyere mgbanwe n’ahụ m, anyị alụọla afọ iri abụọ na otu. Ugbu a, anyị na-enyere ndị ọzọ ndụ aka ịgbanwe site na mgbanwe mmekọahụ. Jiri uru mmadụ baara ndị mmadụ na-emejọ, ọ bụ ụzọ dị oke ọnụ iji jiri oge anyị.
A sị na e duhieghị m site na akụkọ mgbasa ozi banyere mgbanwe mmekọrịta nwoke na nwanyị “ọganiihu” yana ndị dibia bekee kwuru na mgbanwe bụ azịza nsogbu m, agaraghị m ata ahụhụ dịka m tara. Jenetik enweghị ike ịgbanwe. Mmetụta, nwere ike ịgbanwe ma gbanwee. Okwu ndị na-akpata nsogbu na-akpalikarị ọchịchọ ịgbanahụ ndụ mmadụ gaa na onye ọzọ, ọ dịkwa ha mkpa ilebara anya tupu ha ewere usoro mgbanwe nke mgbanwe.
Ga-anụ ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-asị, “akwa ụta dị ụkọ.” Mana ha anaghị agụ igbe mbata m, nke jupụtara na ozi sitere na ndị transgender ndị chọrọ ndụ na ahụ azụ nke anapụrụ ha site na homonụ nwoke na nwanyị, ịwa ahụ na ibi n'okpuru njirimara ọhụrụ.
Mgbe agbazigharị, amatara m eziokwu: Hormones na ịwa ahụ nwere ike ịgbanwe ọhụụ, mana ọ nweghị ihe na-agbanwe eziokwu a na-enwetụbeghị ụdị mmekọahụ gị.
Walt Heyer bụbu nwanyị transgender na-akwado ndị ọzọ na-akwa ụta maka mgbanwe nwoke na nwanyị na MmekọahụChangeRegret.com. Ọ bụ onye edemede nke “Ndị gafere Ndụ Life. "
Nwere ike gụọ echiche dị iche iche na anyị Ndị na-enye onyinye na ndị ọzọ edemede na Mpempe akwụkwọ n'ihu, na Twitter @usatodayopinion na nke anyị akwụkwọ akụkọ Kwa ụbọchị. Iji zaa kọlụm, nyefee echiche na leta@usatoday.com.